Boqonnaa abbakenya Jaarraa Abbaa Gadaa, yemmu dhagenyu naasu guddaa tu nutti dhaga‘aame. J/Jaarraa Abbaa Gadaa umri isaani dargagguummaa irra eegalani ummata isaanif biyya isaani humnan qabmte jirtu bilisa baasuuf jecha hidhaa, biyya irra ari’atamu, beela’u, dheeboochu fi rakkina hiriyaa hinqabne heddu tu isaan muudate. Haata‘u malee, rakina kana hundaaf utu hinjilbeffatin kaayyoo ganama qabatani ka‘an bakkaan gahuuf baayyee dalagan.
Bu‘a lakkaawame hindhumne biyya isaani Oromiyaaf buusu danda‘aniiru. Bilisummaa ummata Oromo haawani utu hinargin darbu isaani baayyee nu gaddisise jira. Yo ta’elle, Guca isaan qabsiisan bakkaan gahuuf, ummanni Oromo haarka tokkon wol-qabate akka ka’u waamichi kenya dabarsina.
Jaarraa Abbaa Gadaa hinduune. Hojiin isaani fi maqaa isaani bara baraan ni yaadtama.
Nuyis akka Tokkummaa Barattoota Oromo Biyyaa Jarmanitti, maati isaani fi firootan dhaaba isaanif gutummaan ummata Oromo ballaaf Rabbi jabina haakeennu jenna.
Qabsawaan ni Kufa Qabsoon ittifufa
Koree Hojii Geggessituu TBOJ irra
Even though his grand dream of liberating Oromia didn't come true, his struggle has resulted a lot of positive outcome to the Oromo people. The great tragedy to the oromo liberation movement is the passing of our father before he witness the liberated oromia, therefore, we call up on the oromo people to dedicate ourselves to redouble our efforts to realize the aims for which he died.
The work of Jarra Abba Gada stays alive and will be remembered from year to year!
We, union of oromo student in Germany extend our sympathy to his family and the entire Oromo people as well as wish God to give his family and the entire oromo people the strength to deal with this great loss.
Victory to the oromo peole
Executive committee of UOSG